नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : धनी हुने रहर छ भने यसरी गर्नुस् बचत !
धनी हुने रहर छ भने यसरी गर्नुस् बचत !
काठमाडौं — धेरै पैसा कमाएर धनी बन्ने रहर अधिकांशलाई हुन्छ । तर, चाहदा चाहदै पनि अधिकांशको त्यो रहर पुरा हुन सकेको हुदैन । धनी बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाइंसँग बचत गर्ने चाहाना हुनुपर्छ । हुनत पैसा जोगाउने र बचत गर्ने चाहना अधिकांशमा हुन्छ । तर, चाहँदा चाहँदै पनि सबैले पैसा जोगाउन सकिरहेका हुदैनन् । साँच्चै पैसा बचत गरी सही ठाउँमा उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यी उपायहरु पयोगी हुन सक्छन ।